सिल्टल्ट विशेषज्ञ: एपीआई वा वेबसाईटबाट वेबसाइटलाई स्क्रैप गर्न उत्तम तरिका
एक अनुप्रयोग प्रोग्रामिङ इन्टरफेस वा एपिआईले तपाइँको सफ्टवेयर र उपकरणलाई एकअर्कासँग कुराकानी गर्न सक्षम गर्दछ।. हामी एक छिटो संसारमा बस्दै छौं, जहाँ सबै छिटो परिवर्तन हुँदैछ, र हामी हाम्रो समय र ऊर्जा बचत गर्न चाहन्छौं. साधारण डेटा निष्कर्षण उपकरण धेरै समय खपत गर्न सक्छ र यो हामीलाई हाम्रो लागि अनलाइन कारोबार चलाउन गाह्रो बनाउन सक्छ, तर API सबै सामाजिक प्लेटफार्महरु को पछि ड्राइभिङ्ग बल को रूपमा कार्य गर्दछ।. यसले न केवल वेबसाइट बाट उपयोगी डेटा निकाल्न मद्दत गर्दछ तर निकालेको डाटा सम्पादन गर्दछ र प्रयोगकर्ताहरूको लागि यसलाई पठनीय र स्केलेबल बनाउँछ - gislaved nordfrost5195 65r15. त्यसोभए, यो भन्नका लागि सुरक्षित छ कि एपीआईहरू प्रोग्रामरहरू र कोडेडहरूका लागि तिनीहरूको अनुप्रयोगसँग कुराकानी गर्न एक राम्रो तरिका हो.
प्राविधिक पृष्ठहरूसँग एपिआई सम्झौताहरू:
विशेषज्ञहरूले विश्वास गर्छन् कि एपीआई डेटा वैज्ञानिकहरूले लेखिएको सटीक कोड हो जसले हामीलाई सजिलो बनाउँछ हामीलाई ठूलो पृष्ठहरूको डाटाबाट निकाल्नको लागि।. यसले टेक्निकल पेजहरूसँग सम्झौता गर्न सक्छ र तिनीहरूको जानकारी स्क्रैप गर्न सक्छ. उदाहरणको लागि, फेसबुक पेजहरू, सामुदायिकहरू, र अन्य यस्तै सञ्जालहरूबाट डेटा प्राप्त गर्न र स्क्रैप गर्न फेसबुक ग्राफ API प्रयोग गरिन्छ.
API - सबै भन्दा राम्रो डेटा स्क्रैपिंग तरिका
प्रत्येक पटक हामी एक विशिष्ट वेबसाइट को डेटा पहुँच गर्न चाहन्छौं जुन हामी APIs को प्रयोग गर्न पर्छ. अन्य साधारण डेटा निष्कर्षण कार्यक्रमहरू र प्रविधिहरूको विपरीत, एपीआईले तुरुन्तै आफ्नो प्रकार्य प्रदर्शन गर्दछ र तपाईंको डेटा 120 भन्दा बढी भाषामा स्क्रैप गर्न सक्छ।. त्यसोभए कि तपाइँ चीनियाँ वेबसाइट बाट जानकारी स्क्रैप गर्न वा जापानी ब्लगबाट जानकारी निकाल्न चाहानुहुन्छ, एपीआई तपाईंको निर्देशन अनुसार तुरुन्तै निकाल्न वा स्क्रिप्ट गर्नेछ।.
व्यापारका लागि API किन महत्वपूर्ण छ?
यदि तपाईंसँग धेरै वेब पृष्ठहरू छन् र एक घण्टा वा दुई भित्र डाटाबाट हटाउन चाहानुहुन्छ भने, API ले यो गर्ने एउटा राम्रो तरिका हो।. तपाईले भर्खरै एउटा एपीआई खोल्नका लागि सही डाटा टाँस्न सक्नु हुन्छ. यसले निम्न तीनवटा तरिकाहरूमा व्यवसायलाई लाभ गर्दछ:
1. व्यवसायहरूले एपिआइहरू अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न सक्दछ
एक व्यवसाय बिना गुणस्तरमा सम्झौता बिना API हरू अनुप्रयोगहरू बनाउन सक्छन्।. केहि अनलाइन कम्पनीहरू औजार र सफ्टवेयर बेच्न र तिनीहरूको व्यापार प्रक्रियालाई सुचारु गर्न मद्दतको लागि खुला एपीआईहरूबाट खुल्ला जानकारीमा निर्भर रहन्छ. वास्तवमा, API को बिना, एक व्यवसाय बढ्न सक्दैन र यसको ग्राहकहरूको लागि उपयोगी अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न सक्दैन.
2. खोजशब्द अनुसन्धान
एपिआई व्यवसायहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले प्रोग्रामरहरूलाई अद्भुत बनाएको छ वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू. यी उपकरणहरूले हाम्रो कार्यलाई राम्रो तरिकामा प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ. उदाहरणका लागि, खोज-आधारित API हरू हाम्रो वेबसाइटहरूको लागि खोजशब्दहरू र वाक्यांशहरू खोज्न सजिलो बनाउँदछ. डाटा स्क्रैप गर्दा, एपिआईहरू हाम्रो लक्ष्य खोजशब्दहरूको ख्याल राख्छन् र उत्पादनमा परिवर्तन नगर्ने वा परिवर्तन गर्दैनन्.
3. API हरू डेवलपर्स र प्रोग्रामरहरूको लागि राम्रो छन्
दुवै विकासकहरू र प्रोग्रामरहरूले API हरूबाट लाभ उठाउन सक्छन् र आफ्ना ग्राहकहरूलाई सबै भन्दा राम्रो अवसरहरू प्रदान गर्न सक्छन्।. उदाहरणका लागि, Reddit मोबाइल अनुप्रयोगको रूपमा सुरू भएको थियो र आफैले मुद्रीकरण गर्न धेरै उपकरण र डेटा निकासी सेवाहरूमा निर्भर रह्यो. अब Reddit वेब ट्राफिक को एक राम्रो स्रोत हो. एपीआई प्रयोग गरेर, तपाईं Reddit-like फोरमहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र केहि दिनहरूमा अधिक से अधिक व्यक्ति संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ.